ICasares Costa (eMarbella) - iPenthouse - I-Airbnb
ICasares Costa (eMarbella) - iPenthouse
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGoran
Indlu entle entsha phakathi kweMarbella kunye neGibraltar inokuthatha abantu abadala aba-3 okanye usapho olunabantwana aba-2.
Le ndlu ikumgama wemizuzu eli-15 kuphela ukusuka elunxwemeni. IPuerto Banus neMarbella zinokufikelelwa ngemizuzu engama-20 ngemoto.
Indawo yethu entle entsha inika umbono omangalisayo woLwandle lweMeditera kunye nebala legalufa. Igumbi ke ngoko liyindawo yokuphumla kuye wonke umntu.
Kwigumbi lokulala kukho ibhedi ye-150X190 kuquka nelinen yokulala. Igumbi lokuhlala linebhedi yesofa yokutsala (140X200) apho umntu omdala omnye okanye abantwana ababini abancinci banendawo eyaneleyo.
Le ndlu ibonelela nge-50m2 yendawo yokuhlala kwaye ibekwe kumgangatho ophezulu. Ikwanazo neeterras ezimbini ezinkulu ezinombono ongakholelekiyo wolwandle! Indawo yokuhlala ine-air-conditioning, ikhitshi inomatshini wokuhlamba kunye ne-tumbler edibeneyo, i-dishwasher, i-microwave, i-coffee machine, i-toaster, i-kettle, njl.
I-elevator ikuzisa ngqo kumnyango wangaphambili wendlu. Indawo yokupaka iyafumaneka egaraji. Ukuba awuziva ufuna ukuqubha elwandle, wena nabantwana bakho ningasebenzisa ichibi lethu esidityanelweyo nanini na.
Indawo ezolileyo enombono wolwandle, indawo eluhlaza kunye nebala legalufa.
Iziko lokuthenga linokufikelelwa kwimizuzu emi-5 ngemoto (Lidl, Mercadona).
Iindawo zokutyela kunye nemivalo inokufumaneka kwizibuko laseDuquesa naseSabinillas. Kwakhona ifikeleleka kwimizuzu emi-5-10 ngemoto.
Ummelwane wethu olungileyo uya kudibana nawe kwaye usoloko ekuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Sinokufikelelwa ubusuku nemini nge-imeyile okanye ngeSMS.
Inombolo yomthetho: 04811